Ogaden News Agency (ONA) – Gudoomiyaha HAD, Cabdiraxmaan Sh. Mahdi oo Khudbad Taariikhi ah ka Akhriyay Dhagaysigii Baarlamaanka Yurub
Gudoomiyaha HAD, Cabdiraxmaan Sh. Mahdi oo Khudbad Taariikhi ah ka Akhriyay Dhagaysigii Baarlamaanka Yurub
Posted by Dayr	/ April 27, 2015
Gudoomiyaha HAD mudane C/raxmaan Sh Mahdi ayaa khudbad taariikhi ka jeediyay baarlamaanka Yurub. Mudane C/raxmaan Madey oo ka mid ahaa xubnaha ku magacawnaa inay ka hadlaan madasha shirka ayaa salaantii iyo mahadnaqii ka dib ku tilmaamay inuu shirkan kusoo beegmay marxalad taariikhi ah oo maamulka Itobiya ay diyaarinayaan waxay ku tilmaameen doorashooyin ay ugu talagaleen in 5ta sano ee soo socota ay ku helaan sharci ay ku cabudhiyaan dalka oy ku xasuuqaan dadka shacabka ah iyagoo isaga dhigaya caalamka inay si dimoqraadiyad ah lagu soo doortay say u helaan taageerada aduunweynaha. Iyadoo buu yidhi mudane C/raxmaan, ay xabsiyada Itobiya ku jiraan boqolaal kun, oo dadka shacabka ah la jidh-dilo, la kufsado, sharci la’aan la xidho, oo gaajo loo dilo iyo in sharaftii aadminimo oo si aan la qiyaasi karin looga qaado shacabka.
Ogadenya marka lasoo qaato, ayuu yidhi HAD, maamulka Itobiya wuxuu ka baxay xadkii laga filyay inay u dhaqanto dawlad qaranimo sheeganaysa oo leh waxaan ku dhisanahay rabitaanka shacabka iyo dastuurka. Shacbaka Ogadenya waxaa ku socda xasuuq si habaysan loo qorsheeyay oo ku talagal ah.
Ciidanka Itobiya iyo maleesiyada la socota ee Liyu Boliska (Hawaarinta) waxay si joogta ah u laayaan dadka shacabka ah ee Ogadenya. Ciidanka Itobiya iyo maleesiyada la socota waxay si wadar ah u kufsadaan haweenka iyo marmarka qaarkood caruurta yaryar iyagoo muddo haysta say eheladooda iyo iyagaba u dhaawacaan nafsiyadooda iyo jidhkoodaba. Wuxuu intaa raaciyay HAD mudane C/raxmaan Madey in xukuumadda Itobiya ay cuna-qabatayn saartay ganacsigii iyo mucaawanadii lasiin jiray Ogadenya kana joojisay dadka shacabka ah noloshii asaasiga u ahayd dadka shacabka taasoo keentay macaluul iyo gaajo kaliftay in dadka qaarkood ay wiilashooda iyo gabdhahooda qoraan inay difaacayaan cadawgooda si loo siiyo raashinka deeqda ah ee caalamka uu bixiyo. Waxay arintaa keentay inay dadka qaxaan oo qaarkood dhexda lagu kufsado ama jidhkooda la qasho oo laga ganacsado.
Gudoomiyeha HAD mudane C/raxmaan wuxuu sheegay inkastoo haya’ado caalami ah sida Kooxda Xuquuqda Aadanaha (Human rights Group) iyo Qaramada Midoobay ay warbixino ka qoreen Itobiya, hadana waxay haysataa taageero xoog leh oo ka difaaca in lagala xisaabtamo gabood-falka xuquuqul insaanka. Waxaa intaa dheer ayuu yidhi mudane C/raxmaan Madey, si Itobiya u qariso dambiyada iyo xasuuqa ay ka wado Ogadenya, waxay ka mamuucday Ogadenya inay galaan saxaafadda caalamka. Say u hirgaliso arintaana, waxay si sharcidaro ah u xidhay saxifiyiin madax-banaan sida Jeffrey Gettlemen iyo xaaskiisa Johann Persson iyagoo ka qaatay qalabkay wax kusoo duubeen. Waxaa ka mid ahaa saxafiyiintii Martin Schibbye iyo Johann Persson oo la xabadeeyey, la xidhay ka dibna si sharaf dhac ah loo horkeenay TV-ga Itobiya oo lagu qasbay inay qirtaan dambiyo aanay galin oo lagu eedeeyay inay yihiin argagixiso. Xataa haya’adihii QM iyo Laanqayrta Cas oo loogu talagalay inay ilaaliyaan xuquuqul insaanka caalamiga ah oo u hogaansan qawaaniinta dawliga ah waa laga joojiyay inay galaan Ogadenya, caalamkana kalama uuna xisaabtamin Itobiya arintaa.
Wuxuu gudoomiyaha HAD ka hadlay falsafadda uu ku shaqeeyo xisbiga EPRDF oo ku dhisan xoog qayaxan, cadaadin iyo brobagaanda. Waa nidaam kali-talis ah oo kuwa xukunka haya ay la-wareegeen maalkii, noloshii dadweynaha, xoriyadii qofka, waxayna abuureen cabsi joogta ah oo aanay jirin sharci kaa qabanaya. Dadweynaha Itobiya, ayuu yidhi mudane Madey, waxay hadda ka quusteen inay miciinsadaan cadaaladda dawliga ah, ka dib markii dhagaha laga fureystay codsigoodii in laga soo gaadho dhibka ay ku hayaan EPRDF-tu.
Dadweynaha Itobiya gabi ahaantii, ayuu yidhi mudane C/raxmaan Madey, iyagoon kala lahayn qawmiyad ama diin, waxay aad u doonayaan inay helaan xukuumad dimoqraadi ah, oo awoodaha dawladda ay kala soocan yihiin, oo sugaysa xoriyadda, sinaanta iyo rabitaanka qawmiyad walba iyo muwaadin walba. 1991kii markii ay dhamaan qawmiyadaha Itobiya la dagaalameen xukuumadii macangagga ahayd ee Mingistu Haile Maryan, oy xukunka ka tuureen, xisbigii ugu xooga badnaa oo ahaa Tigray Peoples Liberation Front (TPLF), oy wehliyaan xoogagii kale oy ku jireen ONLF iyo OLF iyo kuwa kale, waxay isla sixiixeen cahdi qeexaya nidaam dimoqraadi ah oo sugaya sareynta sharciga, xuquuqda haweenka, dadka laga badan yihiin iyo caruurta. Ururada ONLF, OLF iyo SLF (Sidama Liberation Front) waxay ka qaybgaleen doorashadii ugu horeysay uguna dambaysay taariikhda Itobiya oo si dimoqraadi ah u dhacda. Qawmiyad walba oo Itobiya ka mid ahna waxay doorteen baarlamaan, waxayna bilaabeen inay dib u dhisaan mujtamacoodii burburay. Muddo yar ka dib, waxay TPLF-tii la wareegeen hubkii dalka, waxay qabsadeen awoodii caasimadda, markuu caalamka u aqoonsaday inay yihiin dawlad sharci ahna waxay badaleen dhaqankoodii, ayuu yidhi mudane Madey. Ururkii Orormada ee OLF waxay mamnuuceen 1992. Isla 1994kii waxay Itobiya isku dayday inay ku dilaan fagaaraha Wardheer gudoomiyihii ONLF, halkaasoo ay ku dileen 84 qof oo shacab iyo staff-kii la socday Gudoomiyaha. Ka dibna waxay weerar kusoo qaadeen Xaruntii Dhexe ee ONLF, waxayna dileen qaar ka mid ah xubnihii baarlamaanka Ogadenya, ka dibna waxay mamnuuceen Ururka.
Wuxuu mudane C/raxmaan Sh. Mahdi si qota dheer u sharxay siyaabaha ay Wayaanaha u maroorsadeen awoodii dalka Itobiya iyagoo masuuliinta ay doortaan qawmiyadaha qaarkood weerar ku qaada, ka dibna ku tilmaama argagixiso oo mamnuuca. Marka la fiiriyo ururka ONLF, waxay ku shaabadeeyeen Gooni-goosad (Separatist) iyo cadawo inuu u yahay Itobiya. Waxaana la ogyahay in gooni-goosadka ay sheegayaan ay ogol yihiin, maadaama uu cahdigii iyo dastuurkii ay qoreen labadaba uu si cad oon leexleexad lahayn u sheegayo xaqqa aaya-ka-tashiga iyo gooni isu-taaga. Sidaa daraadeed, in urur lagu shaabadeeyo Gooni-goosad ma’aha arin kasoo horjeeda sharciga u dajisan itobiya sidaa daraadeed ma noqonayo dambi. Waxay arintaasi muujinysaa ayuu yidhi mudane Madey, laba wajiile-nimada xukuumada Itobiya, oo ku andacoonaysa inay dhamaan qawmiyadaha xaq u leeyihiin aaya-ka-tashogooda ilaa heer go’itaan, isla markaana ku shaabadaysa inuu ururkaasi yahay Goonigoosad oo dagaal ku qaadaysa.
Waxuu sheegay Gud. HAD inuu maamulka ka taliya Itobiya ka dhisey gobolada Itobiya xisbiyo magac uyaal ah oo codka doorashada shantii sanaba mar ugu shuba xisbiga EPRDF. Waxaad la socotaan buu yidhi; in doorashadii 3xaad ee 2005tii uu ku guulaystey xisbiga Gimbot 7 kuraastii caasimadda dalka Itobiya kolkaasoo islaweynidii xisbiga EPRDF iyo kalsooniday islahaayeen waad haysataan ay sidaa ku waayeen. Dhacdadaa waxaa wehliyay xayiraadda ay ONLF saartay inay shidaalka Ogadenya la baxaan. Labadaa dhacdo ka dib wuxuu si waalni ah ugu dhawaaqay maamulka Itobiya ka dhisan waxay ku tilmaameen qaanuunka la dagaalanka argagixiska, waxyna sidaa ku xidheen dhamaan wadooyinkii loo mari lahaa isbadal ku yimaada hab dimoqraadi ah.
Khudabada uu ka jeediyay Hogaanka Arimaha Dibadda JWXO mudane C/raxmaan Madey oo aad u faahfaahsanayd ayuu ku sheegay in Gobolka Geeska Afrika uu gaadhay meel Afar-irdood ah (crossroad). Wuxuu sharxay Gud. HAD in Itobiya ay ka hesho meela kala duwan oo calamka ah Balaayiin Doolar, oo loogu talagalay Horumarinta iyo dhismaha xukuumad ku dhisan cadaalad iyo dimoqraadiyad. Wuxuu xusay inay Itobiya sheegato Horumar sanadeed laba raqamood ah (double digit figure development), iyadoo qofka Itobiyaanka ah uu gaajo iyo macaluul la ildaran yahay. Waxay Itobiya laaluush ku bixisaa in TV-yada caalamiga ah laga sii daayo sawiro qurux badan oo muujinaya dhul waraab ah, wadooyin laami ah, daaro dhaadheer oo Adis-ababa meela kamid ah laga soo duubay. Maalmo ka hor ayay ahayd buu yidhi Gud. HAD markuu R/wasaare ku Xigeenka Itobiya sheegay inuu furay jaamacad laga dhisayo Qabridahare, waana jaamacadii labaad ee la yidhi waxaa laga dhisay Ogadenya oo ah wadan aan lahayn dugsiyada hoose, oo 90% dadweynaha ku nool ayna haysanin biya ay cabaan, oo roobka sanadkiiba mar da’aya suga. Wuxuu sheegay mudane C/raxmaan Madey in 85% ardayda dhigata jaamacadda Jigjiga ay ka yimaadaan gobolada kale ee Itobiya.
Gudoomiyaha HAD wuxuu ku tilmaamay hadalada kasoo yeedhay haweeneyda ku-xigeenka arimaha siyaasadda ee Mareykanka Madam Wendy Sherman oo ahaa in Dimoqraadiyadda Itobiya ay tahay mid horey u socota iyo hadala kale oo la mid ahaa, ayuu ku sheegay mudane C/raxman Madey inay xaqiiqada aad uga fogyihiin oo aanay shacabka Itobiya la qabin fikradaha noocaa ah. Taageerada siyaasiga ah ee dawladda Mareykanka ay siinayso xukuumad ku dhisan cadaadis iyo dil badheedh ah, waa fariin khaldan oo shacabka Itobiya soo gaadhay, ayuu yidhi mudane C/raxman Madey, gaar ahaan dhalinyarada dalka Itobiya, waxayna ka quusanayaan inuu caalamka ka jiro qaar danaynaya cadaalad iyo dimoqraadiyad dhab ah inay ka hirgasho Itobiya, taasoo keeni doonta inay ku biiraan jabhadaha.
Wuxuu Gudoomiyaha HAD, mudane C/raxmaan Madey ugu baaqay dhamaan xoogaga mucaaradka ah inay meel iska dhigaan khilaafaadka aan macnaha lahayn oo loo midoobo sidii looga dhalin lahaa Itobiya Dimoqraadiyad dhab ah. Khilaafaadka aan macnaha lahayn sida kala doorashada Federaal aan jirin ama Dawlad mid ah, waxay u sahashay xukuumadda EPRDF inay iska horkeento mucaaradka. Wuxuu sharxaad ka bixiyay in labadaa nidaamba uu caalamka ka shaqeeyo kana hirgalay. Wuxuu tilmaamay in Switzerland uu yahay dal federal ah oo ku dhisan xuquuqda kooxaha iyo qofkaba in la ilaaliyo. Sidoo kale dalka Ingriiska wuxuu aqoonsaday Xaqqa aay-ka-tashiga dadweynaha Scotland oo afti xor ah oo laga qaaday iyadoon dagaal weyn uusan ka dhicin, waxayna ogolaadeen inay ku sii jiraan midowga UK.
Wuxuu sheegay Gudoomiyaha HAD in loo baahan yahay inuu isbadalo habka loo fikirayo, maadaama xukuumada EPRDF ay ka faa’idasanayaan khaladaadka mucaaradka, ka dibna ay dhamaan shucuubta Itobiya ku duudsinayaan xuquuqdooda.
Ugu dambayntii wuxuu Gudoomiyaha HAD ka codsaday Midowga Yurub qodobadan;
Inay taageeraan sidii dimoqraadiyad dhab ah ay uga hirgali lahayd Itobiya, ku dhisan in shacabka uu si xor ah u doorto mudanayaasha matalaya.
In Itobiya lagu cadaadiyo inay cunaqabatynta ka qaadaan Ogadenya oy joojiyaan kufsiga ay u adeegsanayaan dagaalka, oy joojiyaan falalka kasoo horjeeda xuquuqul insaanka.
Inay taageeraan Ururada Gobanimadoonka ah iyo xisbiyada mucaaradka ah siday uga dhalin lahaayeen Itobiya xukuumad dimoqraadi ah, si looga hortago mashaqada soo socota iyadoo shacabka uu hubka qaadan doono haduu xal kale waayo.
In la taageero shacabka Itobiya oo aan la taageerin Xukuumad macangag ah oo mucaawanada loogu dhiibo dadweynaha u adeegsanaysa inay ku amar-ku-taaglayso dhamaan gobolka Geeska Afrika.
In dhul boobka beeraha iyo dhulka daaqsinta iyo baadhitaanka shidaalka Ogadenya lagula wareegayo laga hortago.
Intaa ka dib, wuxuu Gudoomiyaha HAD mudane C/raxmaan Sh. Mahdi ku baraarujiyay caalamka in isha lagu hayo waxa ka socda Yemen, halkaasoo ay joogaan qaxooti badan oo Itobiyaan ah, gaar ahaana dadka qaxootiga ah ee Ogadenya iyo Oromiya ka soo cararay. Boqolaal qaxooti ah inay halkaa ku go’doonsan yihiin ayuu sheegay oon dib ugu noqon karin Itobiya, sababtoo ah buu yidhi badankood waxay kasoo carareen dhibaato iyo cadaadis loo gaystay. Wuxuu raaciyay inay ilaa hadda haya’adii UNHCR ay ka aamustay arintaa, sidaa daraadeed uu ka codsanayo Midowga Yurub iyo Mudanayaasha Baarlamaanka Yurub inay arintaa soo qaadaan.
Mudane Cabdiraxman Mahdi/Gudoomiyaha Hogaanka Arimaha Dibadda ee JWXO.
April 23, 2015, Brussels